Khubaro Soomaaliyeed Ayaa Magacyo Soomaali Ah U Bixiyay Maalmaha Iyo Bilaha Sanadka – Great Banaadir
Khubaro Soomaaliyeed Ayaa Magacyo Soomaali Ah U Bixiyay Maalmaha Iyo Bilaha Sanadka
Waxaa Magaalada Jabuuti shir ku yeeshay khubaro kasoo tala bixisa sidii loo bedali lahaa Magacyada Tirsiga Maalmaha iyo Bilaha isla markaana looga dhigi lahaa Af Soomaali.
Guddi arrintan loo xilsaaray oo ka kala socday Deegaannada Soomaalida ayaa soo saaray Kal-tirsi Cusub oo ay Soomaalidu gaar u leedahay.
Kal-tirsiga ay khubaradani soo saareen ayaa ka kooban 7 maalmood ee todobaadka iyo 12-ka bilood ee sanadka.
Ibraahim Axmed Cali oo kamid ah guddigaasi ayaa sheegay in arrintan ay dood badan ka yeesheen khubaradii ka qeyb galeysay.
Ibraahim ayaa intaa ku daray in guddiga lafa-gurayay arrintan ay ahaayeen kuwa ka kala socday dhammaan Dhulalka Soomaalida ee Bariga Afrika.
“Guddigani oo ka kala yimid dhammaan Deegaanada Soomaalida amaba Shanta Soomaaliyeed sida uu gumeysigu u baxshay, kolka hore waxaa la gorfeeyay oo laga dooday todobada ayaamood magacyadooda, waxaa la soo bandhigay illaa wax ka badan 30 siyaabood oo todobada ayaamood loogu kala dhawaaqo oo ay ka mid yihiin tan ugu caansa ee imika la tirsado ee Islaamka ee afka Carabta”, ayuu yir Ibraahim.
Magacyada loo bixiyay maalmaha
Ibraahim Axmed Cali ayaa shaaca ka qaaday in ugu dambeyntii ay guddiga ku heshiiyeen magacyo cuusb oo lagu bedalayo kuwii hore ee maalmaha loo garan jiray.
“Maalmaha cusub ee Af Soomaaliga la isku raacay ee la ansixiyay waa Cadceeda(Axadda), Hobala (Isniin), Wableey(Talaado), Dabra (Arbaco), Fabeeleey (Khamiis), Dusa(Jimco) iyo Diimiley( Sabti),” ayuu yiri .
Waxaa sidoo kale khubarada ay ka doodeen 12-ka bilood iyo magacyada loo bixin doono.
“Waxaa laga dooday 12-ka bilood, guddiga way ansixisay oo waa la isku raacay 12 bilood , waayo awal waxaa la tirsan jiray uun bilaha magacyada Carabiga , bilaha magacyada Faransiiska, bilaha magacyada Ingiriiska iyo bilaha magacyada Taliyaaniga, marka bilo magacyo Soomaalidu leedahay oo cadceedda asal ku leh ayaa la isku raacay,” ayuu yiri Ibraahim.
Ibraahim ayaa si loo dhaqangaliyo go’aannada la isku raacay ee lagu bedalayay Magacyada Maalmaha iyo Bilaha waxaa uu sheegay inay u yeereen Jaamacadaha ku yaalla dhulalka Soomaalida.
“Guddiyo degmooyiinka Soomaalida ku dhan ayaan u wada yeernay kadib shirkaas waxaa loo bandhigay Jaamacadihii Soomaalida ee Geeska Afrika ka jiray oo dhan, iyaguna arrintaas way ansixyeen marka qolo waliba in ay xageeda ka faafiso ayaa lagu heshiiyay,” ayuu yiri.
Ibraahim ayaan shaacin magacyada la isla qaatay ee loo isticmaalayo bilaha sanadkan.
Magacyada maalmaha todobaadka ayaa imika waxaa lagu tirsadaa Magacyo Caraabi ah oo ay dadka u yaqaanaan.
Af Soomaaliga ayaa waxaa ku jira erayo badan oo laga soo ammaahday afaf kala duwan.
Waxaa kamdi ah afafka ay Soomaalida ka soo ammaahdeen Afka Taliyaaniga, Afka Carabiga, Afka Ingiriiska iyo Afka Faransiiska.
Erayada la soo ammaahday ayaa intooda badan noqday kuwa dhaqangala oo qaar kamid ah weliba aan Af Soomaali hagaagsan loo hayn.
Xigasho: Borama News
Shir Uu Mar Kale Isugu Yeeray Madaxweynaha Muddo Xileedkiisa Dhamaaday Ee Soomaaliya Ee Farmaajo
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Oo Loo Magacaabay Maxamed Cabdirisaaq